भाग्य चम्केपछि: सुकुम्वासी लखनको भाडाको जग्गामा भेटिएको चम्किलो ढुंगाले दियो ९६ लाख – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/भाग्य चम्केपछि: सुकुम्वासी लखनको भाडाको जग्गामा भेटिएको चम्किलो ढुंगाले दियो ९६ लाख
काठमाडौं । जब मान्छेहरुको भाग्य चम्किँन्छ तब सफलता मुखमा आफैं आउँछ । भारत, मध्य प्रदेशका कृषक लखन यादवको भाग्य रातारात परिवर्तन भयो । हेर्दाहेर्दै उनी झट्टै लखपति भएका हुन् । लखन लखपति त्यसरी भए जुन उनले कहिल्लै सोचेका पनि थिएनन् होला ? उनको सानो जमिनको टुक्राले सम्भव बनाएको हो ।
जानकारी अनुसार उनले उक्त जमिन मात्र ३२० रुपैयाँमा लिएका थिए । अब लखन, एक राम्रो स्कूलमा आफ्ना चार बच्चाहरु पढाउने तयारीमा लागेका छन् । यसका साथ उनले एक नयाँ मोटरसाइकल पनि किनेका छन् । यो सब कसरी भयो ? भन्ने कुरा धेरैलाई जान्न मन लागेको हुनुपर्छ ।
वास्तवमा, लखनको सम्पूर्ण कथा केही समय अघि मध्यप्रदेशको पन्ना जिल्लाको टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्रबाट कोल्टे फेरेको हो । लखनको परिवार विस्थापित भएको थियो । उनले आफ्नो जमिनमा पन्ना पृथ्वी स्प्रिङ्ग हीरा फेला पारेका हुन् । त्यसकारण कसको भाग्य कहाँ परिवर्तन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
भाग्य खोज्ने उद्देश्यले लखनले १०–१० को जग्गा ३२० रुपैयाँ भाडामा लिएका थिए । उनले एक महिना अघि काम सुरु गरेका थिए । काम गरिरहँदा लखनले एउटा चम्किँलो ढुङ्गा देखेका थिए ।
जब उनले यसलाई सफा गरे, उनले चम्केको प्रष्ट देखेका हुन् । जब यसको परीक्षण गरियो तब १४.९८ क्यारेट हीरामा परिणत भयो । जानकारी अनुसार त्यसको मुल्य झण्डै ९६ लाख पर्दछ । यसरी एक सामान्य किसान रातारात लखपति बन्न सफल भएका हुन् ।